Ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ihe ngosi nke China Square Shower - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Ntọala ịsa ahụ > Ntọala ịsa ahụ Square
Ntọala ịsa ahụ Square Ndị nrụpụta
Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd bụ ọkachamara emeputa na mbupụ na China. Ọ nwere akụkọ ihe mere eme nke ihe karịrị afọ 20 na ụlọ ọrụ plastik na ihe karịrị afọ 10 na ụlọ ọrụ ịdị ọcha. Anyị gafere ISO 9002S njikwa njikwa usoro asambodo na mbido 1999. Anyị na-arụpụta ngwaahịa niile na China. Usoro ịdị ọcha nke ngwaahịa anyị gụnyere ihe ndị a: isi ịsa ahụ, ịsa ahụ aka, ihe ndọtị slide, bracket ịsa ahụ, mmiri ịsa ahụ, setịpụ ịsa ahụ square, bracket ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ, bidet ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ na ngwa ịsa ahụ, yana azụmahịa ngwaahịa ihe ọcha ndị ọzọ. na weebụsaịtị nke emere na China.
Ntọala ịsa ahụ square bụ usoro ngwaahịa dị na setịpụ ịsa ahụ anyị. Mpaghara ahụ dị iche na nhazi okirikiri ọdịnala. Ọ ga-adọta ndị ahịa ka ha bụrụ ụdị imewe n'ahịa. 201 igwe anaghị agba nchara na ọgwụgwọ chrome-plated na-eme ka ngwaahịa ahụ na-egbukepụ egbukepụ, na-eji ebe ịsa ahụ na-asa ahụ na mgbanaka square, ọ dị oke elu.
Ejiri igwe ntụtụ rọba na-achịkwa kọmpụta ọhụrụ; Sistemụ nnwale ọkaibe na igwe nkwakọ ngwaahịa ọnya, anyị nwere ike ịnye gị ngwaahịa dị mma dịka achọrọ. Banyere nkwakọ ngwaahịa, anyị dị mma na nkwakọ ngwaahịa blister na igbe agba, n'ezie, anyị nwere ike ịnye ụfọdụ nkwakọ pụrụ iche ma ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ọchịchọ. A na-akwakọba ihe ịsa ahụ square n'igbe agba ma ọ bụ igbe ọcha. Dị ka onye nrụpụta, anyị nwere ebe a na-akpụzi anyị, ndị injinia nwere ahụmahụ dị njikere ime mgbanwe mgbanwe ọ bụla nke ị rịọrọ n'oge dị ngwa.
Nkwụnye mkpanaka Square ịsa ahụ
Retractable square ịsa mkpanaka set bụ nnọọ pụrụ iche uwe, ya niile ngwaahịa bụ square. Ogologo ogologo nke mkpanaka ịsa ahụ nwere ike ịhazi ya, ọ na-emegharịkwa ya.
Igwe igwe anaghị agba nchara Square Set
ABS plastic square shower set, dakọtara na nnukwu square ịsa set na a square bracket, anya karịsịa coordinated.Welcome ịzụta igwe anaghị agba nchara Square ịsa Set n'aka anyị.
Igwe anaghị agba nchara chrome-plated maka ịsa ahụ Set Set ịsa
Mpụta nke igwe anaghị agba nchara chrome-plated Shower Set Set bụ chrome-plated. Mgbe ịzụrụchara setịpụ a, naanị ị ga-achọ ijikọ ya na ọkpọkọ iji jiri ya. Ụdị nnukwu uwe ndị dị otú ahụ na-ewu ewu na Russia.
Zụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Huanyu Sanitary Ware bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga Ntọala ịsa ahụ Square na china. Ogo anyị dị elu Ntọala ịsa ahụ Square na-ewu ewu na ndị chọrọ inweta ngwa ahịa dị ọnụ ala. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa iji nye ọrụ n'ogbe. Ị nwere ike ijide n'aka ịzụta ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ anyị.